घरमा पलंग वा खाट राख्दा यी कुरामा दिनुहोस् ध्यान Nepalpatra घरमा पलंग वा खाट राख्दा यी कुरामा दिनुहोस् ध्यान
घरमा पलंग वा खाट केवल सुत्ने बस्तुको रुपमा बुझ्न नहुने बास्त्रु शास्त्रीहरु बताउँछन् । पलंगले सकारात्मक र नकारात्मक उर्जा पैदा गर्ने भएका कारण यसलाई राख्दा देखि अन्य प्रयोगमा पनि ख्याल गर्नु पर्ने बास्तुबिदहरुको भनाइ छ ।
घरको गलत दिशामा पलंग राखेमा मान्छेलाई निद्रा नलाग्ने देखि तनाव हुने सम्मका समस्या हुने समेत बास्तु शास्त्रमा उल्लेख छ । यसरी गलत दिशामा राखिएको पलंगमा सुत्दा दाम्पत्य जीवनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने बताइन्छ ।
कहाँ राख्ने पलंग ?
कोठामा ढोकाको नजिक पलंग राख्नु हुँदैन । ढोकाको नजिक पलंग राख्दा यसबाट बास्तु दोष उत्पन्न हुने समस्या हुन्छ । यस्तो पलंगमा सुत्दा निद्रा नलाग्ने र मानसिक तनावको समेत समस्या हुन सक्छ ।
पलंगको अगाडी पर्ने गरी ऐना नराख्नुस्
सुत्ने पलंगको अगाडी पर्ने गरी ऐना राख्नु बास्तुको दृष्टीले राम्रो मानिँदैन । ऐनाले पलंगको प्रतिविम्ब दिनु झनै नराम्रो मानिन्छ । यसले परिवारमा अशान्ति हुने बास्तुविदको भनाइ छ ।
पलंग अति होंचो वा अति अग्लो हुनु बास्तुको दृष्टीले राम्रो मानिँदैन । पलंगको तलपट्टी उर्जा जम्मा हुने र उक्त उर्जा शरीरमा फैलिने भएका कारण पलंगको उचाइमा ध्यान दिनु पर्छ । पलंगको तल सामान राख्नु खराव मानिन्छ ।
पलंगको आसपास यी चिज नराख्नुस्
मानिसहरु सुत्ने पलंग नजिकै टिभी, फ्रिज, कम्प्यूटर आदि इलेक्ट्रानिक सामान राख्छन् । जुन घातक मानिन्छ । यस्ता समाग्रीले नकारात्मक उर्जा उत्पादन गर्ने भएका कारण सुत्ने पलंगको नजिक राख्नु हुँदैन । त्यस्तै गरी सुत्ने कोठामा पानीका तस्विर पनि नभएको राम्रो मानिन्छ ।
हिन्दू धर्ममा शवलाई किन जलाइन्छ ? यस्तो छ कारण